Nagarik News - द्वन्द्वपीडित एनजिओलाई नीतिबिनै करोडौं
मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध हुने यस्तो रकम कुन शीर्षकमा, कसरी खर्च हुन्छ भन्ने अनुगमनसमेत हुँदैन। प्रस्ट नीतिबिनै बाँडिने रकम चरम दुरुपयोग हुने गरेको स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले विगत ९ वर्षदेखि उक्त संस्थालाई 'राजनीतिक विचार र पहुँचकै भर' मा करोडौं दिँदै आएको छ। प्रतिष्ठानले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै ८ करोड रुपैयाँ पाएको संस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ।
सहिदका छोराछोरी पढाउने उक्त एनजिओका कार्यक्रम र अनुदान खर्चबारे अहिलेसम्म कुनै अनुगमन भएको छैन।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेढ वर्षअघि नै प्रतिष्ठानलाई दिइएको रकम सदुपयोग भए/नभएको कुनै अनुमगन नभएको र उक्त संस्था सञ्चालनको अवस्था तथा द्वन्द्वपीडित परिवारको अध्ययन कार्यमा सहभागिताको समेत स्थिति नखुल्ने हुँदा अनुदान रकमका विषयमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयले समितिको निर्देशन अटेर गर्दै निरन्तर अनुदान दिइरहेको छ।
प्रतिष्ठानका उपध्यक्ष तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले प्रतिष्ठानका नाममा यस वर्ष २५ करोड रुपैयाँ बजेट पर्ने सार्वजनिक रुपमै सुनाउँदै आएका छन्। केही दिनअघि दाङमा भएको एक कार्यक्रममा पनि उनले आफ्नो संस्थालाई अघिल्लो वर्षको भन्दा ३ सय प्रतिशतमाथि अनुदान आउने बताएका थिए।
मन्त्रालय स्रोतले पनि उक्त संस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड बजेट दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनायो। मापदण्ड भने अहिलेसम्म बनेको छैन। 'द्वन्द्वपीडित परिवारलाई पढाउने कुरामा रकम उपलब्ध गराउने कुरा राम्रो हो तर यसरी रकम दिँदा निश्चित मापदण्ड तथा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'तर प्रतिष्ठानलाई यो वर्ष रकम बढाउने कुरा छ। के आधारमा बढाउने निश्चित छैन। रकम दिने आधारबिनै राजनीतिक पहुँचकै भरमा रकम उपलब्ध गराउनु गलत हो।'
महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा पनि उक्त प्रतिष्ठानले सरकारमार्फत लगेको रकमको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा कार्यप्रगति विवरणसमेत प्रस्तुत नगरेको उल्लेख छ। लेखापरीक्षण र कार्यप्रगति विवरण उपलब्ध नगारउनुका पछाडि रकम दुरुपयोग प्रमुख कारण रहेको स्रोत बताउँछ।
प्रतिष्ठानका लेखा अधिकृत कान्तिराम ढुंगाना पनि अनुदान उपलब्ध गराउने मापदण्ड नभएको स्विकार्छन्। 'संस्थामा दिइँदै आएको रकम निकै कम छ,' उनले भने, 'नीतिगत रुपमा मिलाउँदै व्यवस्थित बनाउनु राम्रो कुरा हो। तर अहिले आइरहेको रकम विद्यार्थीको पढाइ र शिक्षकको तलबका लागि समेत अपुग छ।'
प्रतिष्ठानअन्तर्गतका विद्यालयमा विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ढुंगानाका अनुसार प्रतिष्ठानअन्तर्गत देशका विभिन्न पाँच स्थानमा आवासीय विद्यालय सञ्चालित छन्। पाँच विद्यालयमा १५ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। प्रतिष्ठानले इटहरी, जिरी, पोखरा, दाङ र डोटीमा आवासीय विद्यालय चलाएको छ।
कति विद्यार्थी पढाएको छ, विद्यार्थीलाई कस्तो अवस्थामा राखेको छ, कस्तो खाना खुवाउँछ? शिक्षकलाई कस्तो सेवासुविधा दिइएको छ? पढाइको अवस्था कस्तो छ भन्ने अनुगमन भने अहिलेसम्म गरिएको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमनका आधारमा विद्यार्थी संख्या बताउन नसकेपछि प्रतिष्ठानले नै उपलब्ध गराएको विद्यार्थी संख्यालाई पत्याउँदै आएको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार कक्षा १ देखी १२ सम्म पढाइ हुने प्रतिष्ठानअन्तर्गतका विद्यालयमध्ये इटहरीमा ३ सय ८, जिरीमा १ सय ७०, दाङमा ४ सय १६, पोखरामा २ सय ३३ र डोटीमा २ सय २५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मण बस्यालले प्रतिष्ठानका नाममा हरेक वर्ष एकमुष्ट अनुदान रकम जाने गरेको खुलाए। 'अर्थ मन्त्रालयबाट आएको रकम हामी उनीहरुलाई उपलब्ध गराउँछौँ,' उनले भने, 'उक्त अनुदान रकम विद्यालयमा कुन–कुन शीर्षकमा कति–कति खर्च भएको छ भन्ने विवरण भने हामीकहाँ आएको छैन।'
उनले अनुदान रकमलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर विभिन्न शीर्षक तोकेर पठाउने व्यवस्था भएको भए रकमको यथार्थ विवरण आउन सक्ने जानकारी दिए।
सहिद परिवारका छोराछोरी अध्ययन गर्ने विद्यालय भएकाले ती विद्यालयको तल्लो कक्षामा नयाँ भर्नादरसमेत घट्दो छ। अनुदान रकम भने हरेक वर्ष बढ्दो छ। सहिदका परिवार निश्चित संख्यामा भएकाले बर्सेनि नयाँ सहिद नहुने र विद्यार्थी संख्या नआउने भएपछि प्रतिष्ठानले आफूखुसी मापदण्ड बनाएर गरिब तथा विपन्न विद्यार्थी अध्ययन गराउने व्यवस्था गरेको छ।
'सरकारबाट अनुदान रकम ल्याउन प्रतिष्ठान बोर्डले आफैँ मापदण्ड बनाएर गरिब तथा विपन्न विद्यार्थी भर्ना गर्ने नयाँ रणनीति लिएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, 'सरकारले साँच्चै उक्त विद्यालयलाई चलाउने हो भने निश्चित मापदण्ड बनाएर विद्यार्थी भर्नाका आधार र रकम वितरणको आधार तय गर्नुपर्छ।'
मन्त्रालयमार्फत उक्त संस्थालाई सबैभन्दा पहिला ०६५ सालमा ५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई सोझै अर्थ मन्त्रालयबाट रकम उपलब्ध गराउने गरी उक्त कार्यक्रम ल्याएका थिए। त्यसयता हरेक वर्ष प्रतिष्ठानका नाममा बजेट छुट्टिने गरेको छ। नौ वर्षको अवधिमा उक्त प्रतिष्ठानलाई आधा अर्बभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइएको छ।
माओवादी नेता स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी संस्थापक अध्यक्ष रहेको उक्त प्रतिष्ठानमा एकनारायण भण्डारीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यसमिति छ।